အချို့သောမော်ဒယ်များတွင် Galaxy Note 8 သည်၎င်း၏ဘက်ထရီပြproblemsနာနှင့်ကြုံတွေ့ရသည် Androidsis
အချို့ Samsung Galaxy Note 8 သည်ဘက်ထရီကုန်သွားသောအခါအေးခဲသွားသည်
Galaxy Note 8 သည် Samsung ၏အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒီ high-end ဟာဒီနှစ်စျေးကွက်အတွင်းမှာထင်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သော်လည်း၎င်း၏ပြitsနာများမရှိဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကတည်းကရှိပါတယ် အချို့ကိရိယာများ၏ဘက်ထရီနှင့်အတူပြaနာတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်.
ကြည့်ရသည်မှာ Device ၏ဘက်ထရီလုံးဝအားကုန်သွားသောအခါ၊။ ဘက်ထရီသည် 0% သို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်အားသွင်းရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ဒါ့အပြင်တချို့ ထိုအချိန်တွင် Galaxy Note 8 သည်ကွင်းဆက်ချိတ်နေသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကလုံးဝပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။
ယခုအချိန်အထိယူအက်စ်မှသုံးစွဲသူများသည်ဤပြproblemနာကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ၄ င်းတို့သည် Verizon သို့မဟုတ် T-Mobile ကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောအော်ပရေတာများမှပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ဤ bug ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသောသုံးစွဲသူများသည်a၏ပိုင်ရှင်များဖြစ်သော်လည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဖုန်း။ သို့သော်ပြtheနာသည်ဤရှုထောင့်တစ်ခုတည်း၌သာတည်ရှိသည်ကိုမူမသိရှိရသေးပါ။ သူတို့မှာရှိသည့် Galaxy Note 8 ဖြစ်သည် Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာအဖြစ်.
ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်တိကျသောပျက်ကွက်မှုဟုထင်ရသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ဘာမှမရှိဘူး ဖုန်းပျက်သွားတယ် လုံးဝ။ ယခုအချိန်အထိ, များစွာသောပြီးသားတစ် ဦး ကိုလက်ခံရရှိပါပြီ Samsung ကအစားထိုး.
ကုမ္ပဏီသည်ယခုအချိန်အထိမည်သည့်ထုတ်ပြန်ချက်မျှမထုတ်ပြန်သေးပါ။။ ၎င်းတို့သည်စားသုံးသူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပုံရသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ငါတို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့, ဒီအစားထိုးရရှိခဲ့ပါပြီကတည်းက ဒါကြောင့် Galaxy Note 8 နဲ့ပြtheနာကိုကုမ္ပဏီကသတိထားမိသည်။
အဲဒါကိုရှင်းပြဖို့နောက်ထပ်စောင့်နေရမှာပေါ့။ ယခုအချိန်တွင်ဤပျက်ကွက်မှု၏ဇာစ်မြစ်ကိုမသိရှိရသေးပါ။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီတင်ပြမည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအဖြေကိုမသိရသေးပါ။ ကျနော်တို့ဒီအကြောင်းပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် Galaxy Note 8 ဘက်ထရီပြproblemနာ လာမယ့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်း။ ဒီပြthisနာကိုသင်ကြုံဖူးသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အချို့ Samsung Galaxy Note 8 သည်ဘက်ထရီကုန်သွားသောအခါအေးခဲသွားသည်
Alarm On မျက်နှာပြင်နှင့်တစ်နှစ်ဘတ်ထရီသည် Garmin Vivofit4အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်
HTC U12 သည် 4k ဖန်သားပြင်ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်